AutoSEO vs FullSEO: Iza no serivisy SEO SEO tokony hofidinao?
Fikarohana Optimization dia lohahevitra sarotra. Raha saika ny orinasam-pifandraisana rehetra dia miankina amin'ny SEO hametraka ny fandaminany eo imasony ankavanana, marina ihany koa fa ny injeniera vitsivitsy ihany no mahalala tsara ny tian'i Google sy ny milina fikarohana lehibe hafa. Mba hihazonana ny haavon'ny kianja filalaovana, ny fanalahidin'ny fikarohana search engine dia tsiambaratelo fiarovana.
Midika izany fa ny fitaovana SEO sy ny fampiharana tsara indrindra dia tsy miorina amin'ny torolalana nomen'ny Google, fa amin'ny fanandramana izay mety sy tsy misy. Arakaraka ny asa ataonao amin'ny fikarohana optimization, mazava kokoa ny faniriana, ny filàna ary ny filan'ny milina fikarohana lehibe.
Tao amin'ny Semalt dia nandany 10 taona nanajanay ny fahaizanay SEO. Efa nanadihady tranokala 1,5 tapitrisa izahay izao ary nirehareha mihoatra ny 600 000 mpampiasa. Izahay dia manana fahatakarana lalina ny tokony horaisinao mba hahazoana ny fikambananay tsy ao amin'ny pejy iray amin'ny Google ihany, fa hatrany amin'ny farany ambony amin'ny laharana. Nandritra ny folo taona lasa, dia niasa mafy izahay mba ho lasa mpanome tolotra SEO ho an'ny fikambanana maromaro.
Fa iza amin'ireo serivisy SEO tokony hofidinao? Androany dia hijery ny fonosana AutoSEO sy FullSEO izahay ; ny fahasamihafana, ny fitoviana ary ny fomba hamantatra hoe inona no safidy mety aminao.
Inona ny AutoSEO sy FullSEO?
Ny zavatra voalohany: voalohany inona ny AutoSEO sy FullSEO?
Amin'ny ambaratonga malalaka, AutoSEO sy FullSEO dia vokatra roa mikendry ny hanao zavatra mitovy: optimize ny tranonkalanao hanatsarana ny filaharan'ny search engine. Izy ireo dia vokatra izay namboarintsika tao amin'ny Semalt nampivoatra an-trano, ary samy efa nampiasain'ny orinasa any amin'ny firenena rehetra eto an-tany izy ireo.
Fa amin'ireo fitoviana fototra ireo, manomboka miova ny vokatra.
AutoSEO dia fitaovana automatique mora iray izay maneho ny fonosana misy ny fidirana. AutoSEO dia natao ho an'ireo izay mitondra ny diany voalohany amin'ny tontolon'ny SEO ary mametraka ny mpampiasa azy.
FullSEO dia fonosana SEO feno. Natao ho an'izay vonona handinika tsara ny fanentanana fikarohana mesin ary mitady vokatra tsara indrindra, haingana sy maharitra. Azonao atao ny mamela ny fanentanana mavesatra rehetra ho anay, satria ny mpampiasa FullSEO dia mahazo fidirana amin'ireo ekipantsika manam-pahaizana SEO.
Andao hodinihintsika ireo vahaolana ireo, ary hojerentsika tsara ny fomba fiasan'ny tsirairay.
Torolàlana ho an'ny AutoSEO
Te hampitombo ny fahitana sy ny fivarotana marika ve ianao? Efa eo amin'ny tontolon'ny fikarohana fikarohana fikarohana ve ianao? Te hahita valiny vitsivitsy ianao alohan'ny hanekenanao fampiasa betsaka amin'ny fampiasam-bola lehibe kokoa?
Ny AutoSEO dia mety ho vokatra ho anao.
Ny fonosana AutoSEO an'ny Semalt dia natao ho an'ny orinasa te-hampitombo ny fifamoivoizana amin'ny tranokala, saingy tsy te-hampiasa vola amin'ny fampiroboroboana tranonkala amin'ny ambaratonga voalohany, farafaharatsiny mba hahitany ny tena vokatra. AutoSEO dia mametraka anao eo amin'ny sezan'ny mpamily, mamela anao hanangana hetsika SEO kely toy ny $ 0.99 US.
Ahoana ny fiasan'ny AutoSEO?
Andao hojerentsika ny fahatapahan-dresaky ny fomba fiasan'ny AutoSEO.
Fisoratana anarana: Manomboka ny fizotran'ity raharaha ity amin'ny famenoana ny taratasy fisoratana anarana AutoSEO tsotra.
Famakafakana tranokala: Ny tranokalanao dia manadihady, ary ny AutoSEO dia hitatitra izay tontolon'ny tranokalanao manoloana ny fananganana tranokala sy ny fenitry ny indostria SEO.
Fampivoarana paikady: Miara-miasa amin'ny iray amin'ireo manam-pahaizana manokana momba ny SEO ambony anananao, ny mpitantana anao Semalt dia hanao famakafakana feno kokoa amin'ny tranokalanao, ary hamorona lisitr'ireo hadisoana sy tsy mahomby ilaina raikitra.
Manatanteraka tolo-kevitry ny tatitra: rehefa nahazo ny protocol famindrana rakitra (FTP) na ny admin panel CMS isika dia hanao ny tolo-kevitra ny injeniera mba hiantohana ny fampielezana AutoSEO mahomby.
Fikarohan-teny: Ny injeniera SEO dia manamboatra lisitr'ireo teny fanalahidy hampidirina ao amin'ny tranonkalanao, nosafidina hampiakarana ny varotra sy ny fifamoivoizana.
Fanamboarana rohy: AutoSEO dia manomboka mametraka rohy voajanahary mankany sy avy amin'ireo loharano azo itokisana manerana ny tranokalanao, mampitombo ny fahitana azy. Semalt dia manana tranokala misy tranokala mpiara-miasa avo lenta maherin'ny 50.000, ary mifantina mifototra mifototra amin'ny taonany sy TrustRank ny rohy . Ny fanamboarana rohy dia tanterahana amin'ireto fatrany manaraka izao: rohy amin'ny marika 10%, rohy 40% fika, rohy 50% tsy misy vatofantsika.
Fanentanana ny fampielezankevitra: Ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra ataonao dia arahina amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny laharan'ny lisitra isan'andro.
Fanaraha-maso hatrany: Ny AutoSEO dia manohy manara-maso ny fivoaran'ny fampielezankevitra, manome ny tatitra amin'ny alàlan'ny mailaka na ny rafitra fampahafantarana anatiny.
Iza no AutoSEO?
AutoSEO dia natao ho an'ireo izay te hianatra bebe kokoa momba ny SEO alohan'ny hanaovana fampiasam-bola lehibe izy ireo. Natao ho an'ny fitsapana sy tinkerer izay tia fangaraharana sy fifehezana. Natao ho an'ny olona rehetra te-hanomboka ny dian'izy ireo SEO amin'ny fomba lafo sy manara-penitra.
Torolàlana ho an'ny FullSEO
Te ho tsara indrindra ve ianao? Fantatrao ve ny lanjan'ny fikarohana fikarohana, ary maniry ny vahaolana feno sy mahomby azo atao? Te hampiasa vola amin'ny ekipa voaporofo ve ianao izay afaka mahita valiny tsara indrindra azo atao?
FullSEO ilay fonosana mety.
FullSEO dia tolotra SEO Rolls-Royce amin'ny Semalt. Vahaolana mitambatra miaraka amin'ny paikady SEO feno izy io. Mahazo mandinika lalina avy amin'ireo manampahaizana momba ny indostria ianao, tsy an'ny tranonkalanao ihany fa an'ny tranokalan'ny mpifaninana ary ny niche ao amin'ny orinasanao. Mampiasa teknika SEO efa voaporofo sy voaporofo ary manome fampandrosoana feno tranonkala avy amina ekipa manam-pahaizana momba ny Semalt izay handeha amin'ny fifandraisana tsy tapaka. Ity fonosana ity dia manome antoka ny fitomboan'ny fifamoivoizana manan-danja sy ny fiovam-po ambony.
Ahoana ny fiasan'ny FullSEO?
Ny fonosana FullSEO dia azo avaina amin'ny sokajy efatra lehibe: famakafakana, fanamafisana anatiny, fananganana rohy ary fanohanana.
Ny famakafakana lalina dia hotarihin'ny ekipa manam-pahaizana momba ny Semalt SEO sy ny mpitantana Semalt anao manokana. Ity valiny ity dia handrakotra:
Famantarana ireo teny manan-danja mifandraika izay hahasarika ny mpijery izay lehibe sy akaiky indrindra.
Fakafakao ny firafitry ny tranokala sy ny fizarana teny fanalahidy hahitana hoe mifanaraka amin'ny fomba fanao SEO tsara sy misafidy pejy web ho ivon'ny fampiroboroboana ny tranokala.
Manangona fampahalalana momba ny tranokalan'ny mpifaninana aminao sy ny niche mba hahatrarana ny Google ambony indrindra azo atao.
Optimization tsara anatiny
Rehefa vita ny famakafakana, ny ekipa manam-pahaizana momba ny SEO, miara-miasa amin'ny mpikirakira tranonkala Semalt, dia hanao optimization anatiny ny tranokalao mba hihaona ireo mombamomba ny lozisialy fikarohana ary hanaisotra ireo lesoka na fanerena mety hisakana anao. indray. Mandrakotra ny dingana fanamafisana anatiny:
Ny fananganana marika meta sy marika alt mifototra amin'ny famakafakana ny teny fanalahidy teo aloha.
Manatsara sy manatsara ny kaody HTML tranokala ary mametraka toetra ilaina.
Fanovana ny robots.txt sy ny rakitra .htaccess mba hampisehoana amin'ny tranokala fikarohana araka ny tokony ho izy. Miteraka fileovana sitemap ho an'ny fanaterana feno ny pejin'ny tranokala.
Mametraka bokotra media sosialy ao amin'ny tranokala ho an'ny fanatsarana ny fifandraisana.
Na dia azo noheverina ho ampahany amin'ny dingan'ny optimization anatiny aza, dia ilaina ho toy ny dingana iray ny fananganana rohy. Mandritra ny fananganana rohy, ny ekipanay manam-pahaizana momba ny SEO dia:
Fakafakao ny 'ranom-pifandraisana' an'ny tranokalanao (ny sandan'ny motera fikarohana na ny sandany nolalovina pejy iray mankany amin'ny iray hafa).
Manakatona rohy ivelany tsy ilaina na tsy tiana hahahita ny kalitao pejy.
Fantaro ny toerana tsara indrindra hametrahana rohy vaovao sy mahomby kokoa.
Mamorona ny rohy mifandraika mifandraika mitaky izay azo takiana amin'ny tampony amin'ny Google. Izany dia atao amin'ny fampidirana rohy kalitao amin'ny atiny tokana mifandraika amin'ny lohahevitrao hanamafisana ny fahombiazan'ny fampiroboroboana anao.
Adiresy ny hadisoana 404 ary esory ny rohy tapaka.
Ny farany nefa amin'ny lafiny maro, ny ampahany lehibe indrindra amin'ny piozila FullSEO dia ny fanampiana mitohy nomen'ny mpitantana Semalt anao manokana. Hanara-maso ny fivoaran'ny fampielezankevitra ataonao isan'andro isan'andro ny mpitantana anao, manao fanitsiana ary hitazona ny dingana napetrakao isaky ny dingana. Ny mpitantana anao dia:
Manome tatitra momba ny fivoaran'ny fampielezankevitra isan'andro na amin'ny fangatahana.
Manome anao hidirana amin'ny foibe fanaovana tatitra izay ahafahanao manadihady momba ny doka momba ny fampielezan-kevitra amin'ny antsipiriany.
Iza no FullSEO?
FullSEO dia natao ho an'ny rehetra vonona ny hiasa mafy amin'ny fikarohana fikarohana, na multinational lehibe iray na orinasa kely eto an-toerana. Izy io dia fonosana feno izay ahafahanao mandray anjara na tsy misy tànana araka izay tianao. Raha te hampitombo ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao ianao, ny tahan'ny fifanakalozana anao na ny faran'ny orinasanao dia tsy misy fitaovana tsara kokoa.
AutoSEO vs FullSEO: manao antso
Mbola tsy azonao antoka hoe inona ilay fonosana hofidiana?
Ny safidy iray dia ny hanombohan'ny dianao amin'ny 14 andro, tsy misy fitiliana tsy misy fepetra ny AutoSEO amin'ny $ 0,99 fotsiny. Raha tsapanao ho faniriana bebe kokoa ianao dia afaka mifindra mora foana amin'ny FullSEO!
Safidy hafa dia ny mandre izay holazain'ireo mpanjifantsika momba ny safidy tsirairay. Jereo ny pejin'ny fijoroana ho vavolombelona ataonay ho an'ny mpanjifa mba hahitana ny fihetseham-pon'ny fikambanana hafa momba ny fonosana tsirairay - ny fahombiazana, ny fahazoana aina ary ny zavatra ieritreretana.
Rehefa tapitra ny andro, na inona na inona safidinao nofidinao, dia afaka matoky ianao fa ny tranokalanao sy ny fikambanananao dia ho tsara kokoa ho azy. Toerana fitomboan'ny Google, fifamoivoizana bebe kokoa, fiovam-po ambony kokoa ary fantsom-barotra ambany kokoa.
Tsy misy mandany fotoana intsony. Mifandraisa amin'ny ekipa namanay anio!